Igbo, John: Lesson 025 - Ịjụ Kraịst na-eduga na Ikpe (Jọn 3:17-21) | Waters of Life
Home -- Igbo -- John - 025 (Rejecting Christ)
d) Ịjụ Kraịst na-eduga na Ikpe (Jọn 3:17-21)
17N'ihi na Chineke eziteghi Ọkpara-Ya n'uwa ka O kpe uwa ikpé, kama ka ewe zọputa uwa site n'aka-Ya. 18 Ekpeghi onye kwere na Ya ikpé. Onye nēkweghi na Ya ekpewo ikpé ub͕u a, n'ihi na o kweghi n'aha nke Ọkpara Chineke muru nání Ya. 19 Nka bu ikpé ahu, na ìhè ahu abiawo n'uwa, ma madu huru ọchichiri n'anya kari ìhè; n'ihi na ọlu-ha jọrọ njọ. 20 N'ihi na onye ọ bula nke nēme ihe nādighi nma nākpọ Ìhè ahu asì, ọ dighi-abiakute kwa Ìhè ahu, ka ewe ghara ikpughe ya. 21 Ma onye nēme ezi-okwu nābiakute Ìhè ahu, ka ewe me ka ọlu-ya puta ìhè, na emeworo ha na Chineke.
Onye baptizim na-ekwusa banyere Mezaịa nke ga-ekpe ndị mmadụ ikpe, na-egbutu osisi ndị nwere ọrịa n'ime mba ya. Ma Jizọs gwara Nikọdimọs na Ọ gaghị akpọ ọkụ, mana na ọ bịara ịzọpụta. Onye nzoputa anyi di ebere. Mgbe Baptist ghọtara ihe nzuzo nke mkpuchi mmehie, ọ kpọrọ Jizọs Nwa Atụrụ Chineke, onye na-ewepụ mmehie nke ụwa.
N'anya Ya, Chineke zitere Ọkpara Ya ọ bụghị naanị ndị Juu, kama maka ụwa. Okwu ahụ bụ "ụwa" pụtara ugboro atọ n'amaokwu nke 17. Nke a bụ ihe ijuanya nye ndị Juu na-emeso ndị mba ọzọ dịka nkịta. Ma Chineke hr kwa mba niile n'anya, dika mkp r nke Abraham. Ihe nile kwesiri ikpe, ma Jisos abiagh i ikpe ma ikpeputa. Site na mmalite, o mezuru onyinyo nke agwọ ahụ e buliri elu dịka n'obe ya, iji kpee ikpe maka ụmụ mmadụ Ịhụnanya Chineke abụghị agbụrụ mmadụ kama ọ na-ekpuchi mmadụ nile.
Mgbe ahu, Kraist ji okwu okwu di nma: "Onye kwere na Okpara adigh ikpe ya ikpe." N'ihi ya, a na-achụpụ egwu niile banyere ụbọchị ikpé. Ya mere, okwukwe na Kraist na-eme ka anyị ghara ịnwụ ọnwụ ma ọ bụghị ya. Ị nweere onwe gị ikpe ma ọ bụrụ na ị tụkwasịrị Jizọs obi.
Ndị na-ajụ nzoputa nke Kraịst na-eche na ọ dịghị ha mkpa, ndị ìsì, ndị nzuzu, na ndịwapụrụ na amara ọ na-enye. Ndị nabataghị ike Kraịst, na-agbanye ìhè nke ìhè nke Mmụọ Nsọ. Onye na-eleda ọnwụ Kraịst ma ọ bụ na-agọnahụ ya, na-enupụrụ Chineke isi ma họrọ onwe ya. Ọrụ anyị niile adịghị eru eru ma anyị erughị ebube Chineke.
Jizos kwuru ihe mere ufodu ndi mmadu ji ju nzoputa: ha huru nmehie karia ezi omume nke Chineke ma wezuga onwe ha site na Kraist ìhè nke uwa, ya mere ha rapara n'aru nmehie ha. Kraịst maara obi anyị, na ihe kpatara nsogbu obi ọjọọ anyị. Omume ndị mmadụ adịghị njọ. Ọ dịghị onye dị mma n'onwe ya. Echiche anyị, okwu na omume dị njọ site n'oge anyị bụ nwata. Okwu ndị a gosipụtara na Nikọdimọs, karịsịa dị ka Kraịst jiri ịhụnanya mee ka ha nwee obi ụtọ ma dọta ya ka o chegharịa.
Jizọs kwukwara na onye na-atụkwasịghị Kraịst obi, hụrụ ihe ọjọọ n'anya ma kpọọ ezi asị asị, na-arapara n'ahụ mmehie ya. Ọtụtụ ndị ikom bụ ndị ihu abụọ, na-ezochi mmehie ha n'okpuru ọchị ọchị. Ha kpọrọ Kraịst asị, n'amaghị ama ma ọ bụ mara ụma. Ị kwupụtawo mmehie gị nye Jizọs? Ọ bụrụ na ị kwupụtaghị mmehie gị, ị pụghị ịmịta ọzọ. Meghee obi gi n'ìhè Chineke, a ga-eme ka ị dị ọcha; okwukwe na Nwa Atụrụ Chineke na-edo anyị nsọ. Ya mere wedara onwe gi ala ma kwuputa ire gi, igubere na Kraist, i ghadi ndu rue mgbe ebighebi.
Igosipụta okwukwe anyị n'ụzọ dị irè pụtara ime ihe ziri ezi. Nkwadebe a maka ịnakwere eziokwu nke Chineke bụ ọnọdụ nke mmeghari ohuru anyị. Onye obula nke banyere eziokwu nke Kraist obughi nani site n'amamihe kama site na aru ya nile, emeghariri omume. Ndi b͕agọrọ ab͕agọ ab͕agọ ab͕agọ ab͕agọ ab͕agọ ab͕agọ ab͕agọ ab͕agọ ab͕agọ ab͕agọ ab͕agọ ab͕agọ. Ndi ah am roro ozo ab ghi ihe di mma n'oge gara aga, ma ha ekwup tara nkwo roha, Chineke nke kwesi rint kwasi obi agbagharawo ha. Nzo nso di ocha amalite nime ha; Naenye ha ike ohi inke Mmoya. Chineke na-arụ ọrụ n'ime ndị kwere ekwe site na Kraịst iji nweta ọrụ udo.
Anyị adịghị ajụ ịrụ ọrụ ọma, mana ndị a esiteghị na anyị mana sitere na Chineke. Anyị anaghị akwụ ụgwọ; ọ bụ site na amara Ya. Nke a pụtara na anyị ga-ahapụ ezi omume onwe onye, ​​dabere na mgbalị ego, ma bụrụ ndị meghere n'ezi omume nke amara dabere na ọbara Kraịst. Ndo niile amgharo ma bo nime Kraist choro Chineke obi. Ndụ ha aghọwo ekele maka amara Ya. Ọmụmụ ọhụrụ na ndụ dị nsọ bụ ofufe nke na-amasị Chineke.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs, ekele gị maka ịmị ikpe maka ụwa. Anyị na-akpọ isiala nye gị, n'ihi na anyị agaghị aga n'ihu ikpe ahụ, ebe anyị na gị dị n'otu site n'okwukwe. I weputara ayi n'iru ọnuma Chineke. Anyị kwupụta mmehie anyị n'ihu gị; kpochapu anyi site n'inwe ike ime nmehie. Mepụta mkpụrụ nke Mmụọ Nsọ n'ime anyị, ka ndụ anyị wee gosipụta ofufe na ofufe nye Chineke, Nna nke eluigwe.
Gini mere ndi kwere ekwe nime Kraist gagh agabiga ikpe?
Page last modified on March 05, 2020, at 05:46 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)